Iyo 0.9.17 World of Tanks kugadzirisa ichauya riini? Chii chitsva Kupi kurodha? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Iyo 0.9.17 World of Tanks kugadzirisa ichauya riini? Chii chitsva Kupi kurodha?
Zvidzoreso mumutambo uyu zvinobuda pamwe chete nemwedzi miviri. Iyo inotevera kugadzirisa pasi pehuwandu hwe0.9.17 inofanirwa kuoneka pamangwanani ezororo reGore Idzva, pamwe zvishoma pakutanga, munaNovember.
Izvo zvinozivikanwa kuti matangi matsva achaonekwa, ePolish.
Iwe unogona kutevera iyo yekuvandudza pane ino saiti yepamutemo.
Kuwedzerwa kuverengera 0.9.17 yemutambo uno weWorld of Tanks mutambo uchaburitswa chete mumwedzi waFebruary. Parizvino, iri kure muzvirongwa, uye panguva ino vatambi vari kushandisa yazvino vhezheni iri pasi pehuwandu 09.14.
Iyo Yenyika yematangi kugadzirisa iri kungotenderera kukona. Mumwedzi mishoma chete, shanduro itsva yemutambo ichaburitswa - 0.9.17.
Muchokwadi, matavi akati wandei ekuvandudzwa kwematangi anozowedzerwa, anonzi Chipolishi.
Chichava Chiitiko cheNew Year.
Uye ikozvino kuyedzwa kwakakura kwekuvhenekerwa kwekutanga kwetemba 0.9.16 kuri kuyedzwa zvikuru. Mini-mamepu shanduko mariri, ivo vanogumiswa, vatambi vhezheni vachashandurwa zvishoma, iyo chiitiko bhaisikopo uye kugoverwa kwemauto kuchamiswa chikamu.
Izvo zvichave zvinogoneka kuvandudza mukuvhura kwemutambo.
MunaSeptember 2016, zvakange zvichitaurwa kuendesa iyo DLC 0.9.16 kune inozivikanwa toy toy; World of Tanksquot ;. Iye zvino pane network iwe unogona kuwana tentative runyorwa shanduko dzichaita ino nekugadzirisa.
Sezvo zvigadziriso zvinobuda kazhinji nguva dzose mushure menguva yakaenzana, ipapo inenge 0.9.17 inofanira kutarisirwa munaNovember 2016. Kana iyo yekuvandudza ikava yakakura-chiyero, ipapo kuburitswa kwayo kunogona kunonoka nemwedzi uye mharidzo inoitwa neGore Nyowani, kunyangwe, ini ndichifunga, pachave nezvimwe zvinoshamisa ipapo.
Kuti uzive nezve zvemukati meiyo DLC 0.9.17 nenzira inokurumidza, ini ndinokurudzira kuti ugare wongotarisa zvinozochengeterwa pawebhusa yepamutemo yeWOT webhusaiti, kana nhau yekufambisa pane ino sosi.
Kuburitswa kwematsva mumutambo quot; Nyika yeTanksquot; Unogona kutarisisa pano muchikamu ichi chevashandi vepamutemo. Tichifunga nezve kusajeka kwakawanda kwechitarisiko chavo, nguva yekuburitswa kweiyo 0.9.17 inogona kungodaidzwa kuti tentatively - kazhinji, ichave nguva kubva munaNovember kusvika Zvita wegore rino.
Parizvino, mutambo wePasi rose weMatangi une vhezheni 0.9.13, asi vanogadzira chete vanogona kufungidzira izvo zvichave mune iyi vhezheni 0.9.17. Nekuti shanduro 0.9.14 ichave yakagadzirwa ikozvino. Uye mune shanduro 9.13, iyo Czechoslovak bazi rematangi kubva pazinga 1 kusvika ku10 rakawedzerwa. Uye zvakare yakagadziridza uye nekuvandudza matangi mazhinji.
Mangwanani-ngwanani kutaura nezveruzivo 0.9.17 muNyika dzeTanks mutambo, sezvo munaFebruary wegore rino chete shanduro 0.9.14 iri kuyedzwa.
Nekudaro, handina mubvunzo kuti vanogadzirisa vachazosvika iyi vhezheni nekufamba kwenguva.
Vakavhura chikamu pane webhusaiti yepamutemo, icho chinotsanangura zvese nhau zvine chekuita nezvinotevera zvinotevera. Vagadziri vane zvinosvika kure zvirongwa zvekuvandudza uye kugadzirisa mutambo.
Unogona kujairana neyako inotevera shanduro pano.
Gadziridza 0.9.17 yemutambo uyu wakakurumbira unofanirwa kuburitswa mukupera kwa 2016, kazhinji mumwedzi waDecember. Fans haigone kumirira kwenguva refu. Unogona kutarisisa zvitsva kumutambo panguva ino iyi link ..
Izvo hazvisati zvazivikanwa kuti shandukoi dzichaitika mune ino shanduro, zvinongozivikanwa kuti vanogadzira vanofanirwa kuwedzera matangi ePoland.
Mukuwedzeredza 0.9.17 nokuti World pamusoro Motokari dzehondo, bazi rematangi ePoland richawedzerwa, pamwe neSweden PT_SAU, inonyanya kuitika. Sweden PT_SAU ichamiririrwa nemapazi maviri ebudiriro, sezvo kwaive nemotokari uye isina turret inotenderera. Aya anti-tangi pfuti ichave neakanaka uye nekukurumidza-kupfura pfuti, yakanaka maneuverability, asi kushomeka kwezvombo pakiti. Nekuuya kwemota dzerudzi urwu, iyo Gameplay ichauya iri mupenyu zvishoma.
Munguva yepedyo yepedyo mune mutambo qu; Nyika yeTanksquot; Kwidziridzo 0.9.16 ichave yakaburitswa, sezvo rimwe zuva iro rakakura zvikuru reiyi shanduro richitanga, iwe raunogona kuziva nezvaro pane ino sosi.
Ipedyo nguva yechando kana yatovepo gore idzva rakaregedzerwa 0.9.17 ichaburitswa, iko kutanga zvekare kutaura pamusoro pazvo, asi zvinove zvichizivikanwa kuti bazi rePolish tanks rinofanira kuwedzerwa.
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,301 masekondi.